Yintoni efanelekileyo? Imisebenzi Efanelekileyo?
Izinzuzo zeSatifikethi esiPhezulu:
Iyakwazi ukuba yintsha uhlambalaza izixhobo abafikile emva kwepopu kunye nekhanda babesele batyunjwe kwiimarike. Inendlela eyahlukileyo yokulungisa isisombululo se-IT kunye nemiba yokuzenzekelayo. Umbhali wokuqala we-Ansible wakwenza oko, ngenjongo yokuba usebenzise i-infrastructure, akufanele ufune ukuba ufunde inkqubo. Ukuxhuma kwiiseva ezikude ezifuna ukulawulwa, ezinokusetyenziswa okanye zisebenzise i-ssh ye-system esebenzisa i-nix kunye ne-winrm (iifestile zokulawula kude) kwiinkqubo ezisekelwe kwiifestile. T
UkuQeqesha Kufuneka ukuba ilula, ihle, ihlasele kwaye ilula ukuyifunda. Imiyalelo / amanyathelo / imisebenzi efunekayo kubhalwe kuyo Yamla. Imisebenzi iyenziwa ngokulandelana. Kulo msebenzi, kufuneka sivakalise imeko yenkqubo. Umzekelo: i-packaged vim ifanele ifakwe. Indlela ekufuneka ifakwe ngayo, ephathwayo / ephethwe ngumxube, akudingeki sikhathazeke kakhulu malunga nayo. Ukuba loo phakheji isele ifakwe, kwaye iyakwazi ukuyihoxisa loo nyathelo. Oku kubizwa ngokuba yi-Idempotence.
YAML, ifomati yombhalo olula, okulula ukufunda nokubhalela bobabini kubantu kunye noomatshini. Umlingo obangela ukuba kwenzeke kwenzeka kwizinto ezibizwa ngokuba yiimodyuli. Iimodyuli ziyakubhalwa kuyo nayiphi na ulwimi yolwimi. Iyakwazi ukukhawuleza kwaye ayifuni naliphi na i-ejenti ukuba ifakwe kwi-server ekujoliswe kuyo. Ungasebenzisa nokuba ulungelelanisa ukulungelelanisa / ukutshintsha, ezithe zisekelwa Ngakwazi (kwaye liluhlu).
Ukuba ufuna ngokwenene ukumba ubunzulu kwiZimodyuli zesiko, okokuqala, kufuneka ufunde okanye ufunde ulwimi lwenkqubo.
Omnye obalulekileyo ngeenzuzo ezifanelekileyo kukuba likhululekile kwaye livulekile umthombo. Kubhaliwe kwiPython kwaye nabani na oqonda i-python banokufunda ikhowudi kwaye bayiguqule ukuba kuyimfuneko ukuhambelana neemfuno zabo. Ukuqwalasela ukuthandwa kunye nokuthotyelwa yi-shishini, i-Redhat ithengile i-2015, kwaye ngoku iyingxenye esemthethweni ye-Redhat. Musa ukuxhalabisa okubonakalayo kusekhona umthombo okhululekile kunye novulekileyo, i-Redhat iyaqhubeka nokuphucula, ikhowudi yokunikela kunye nokukhusela le projekthi. I-Redhat inikeza iqonga le-GUI elisekelwe kwiwebhu elibizwa ngokuba yiNqabayo eNqabileyo kwaye iyahlawulwa kwaye iyabiza kakhulu kwimbono yam. Yile ndlela uRedhat eyenza ngayo imali kwi-Ansible. Inqaba ebonakalayo inikeza ulawulo oluphambili, kunye ne-analytics efanelekileyo kunye neengxelo, kunye ne-CMDB / i-inventory.
Iyakwazi ukulungele ukuPhathwa kweTshintsho, Ukuzenzekelayo, ukubonelela kunye nokuhlaziya. Ngalesi sixhobo sinye ungalawula amaseva wakho kunye nezicelo zakho. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokufunda nayiphi na isistim esithile sokusetyenziswa kwezixhobo ezifana ne-capistrano, ingubo njl
I-Certified Certification eGurgaon
Ukuzenzekelayo kunye noNcedo